u-Conrad uyajabula ngalapho i-SA ‘A’ ibheke khona
Umqeqeshi we-Powerade South Africa A, u-Shukri Conrad unelisekile indlela ethathwa iqembu lakhe emuva kokuthi babambe ukuthuka futhi baphuma phezulu ngama-wicket amabili kanye ne-bonus point, kumdlalo wokuqala we-One-Day Triangular series bedlala ne-India A ngoLwesithathu.
i-South Africa ibijabulela okuningi ngesikhathi bekhipha izivakashi ngo-152 kuma-overs angu-41.5. Ama-spells amahle aphuma ku-Aaron Phangiso (4/30 in 10 overs), u-Dwaine Pretorius (2/24 in 8 overs) no-Beuran Hendricks (2/15 in 6 overs) kunciphise umphumela, kwathi u-Henry Davids (1/4 in 0.5 overs), u-Jon-Jon Smuts (0/12 in 3 overs) no-Junior Dala (0/35 in 7 overs) balethe incindezi umdlalo wonke.
u-Conrad ukholwa ukuthi indlela iqembu elinqobe ngayo kungabalethela ukuzithemba uma beyaphambili futhi bekudingekile emuva kohambu oluphoxile e-England ngenyanga edlulile.
“Ukuthi ubumpintshene ngabe ngisho okuncane,” ekhuluma ngomdlalo wangoLwesithathu. “Wonke amaqembu adinga ukunqoba, kodwa ngicabanga ukuthi iqembu lethu belidinga kakhulu ukunqoba ngoba kusho ukuzithemba okuningi. Uma besihluleka kumdlalo onama-runs amancane, bekungathi okubi kwase-England bekungabuya, kodwa ngiyaziqhenya ngendlela iqembu elabambelela ngayo.”
“Kuningi okuhle esingakuthatha emdlalweni odlulile. Ngicabanga ukuthi ukuphosa kwethu bekuncomeka, ukuvimba kwethu bekukuhle futhi uma sikhuluma ngokushaya, u-Farhaan (Behardien) no-Dwaine (Pretorius) batshengisile ukuthi yingani bedlala indima kwiqembu lesizwe. Isipiliyoni abasilethayo, umoya ophansi kanye nothando lokwenza umsebenzi kuhambe indlela ende.”
Umqeqeshi unike iqembu amaphuzu ayisikhombisa kwayishumi emdlalweni futhi ufuna ukubona kudlalwa kangcono kwezinye izindawo, kodwa ubancomile abaphosayo ngokuqala kahle ngaphambili, wagcizelela ngendima ka-Phangiso.
“Sicacise kwasekuqaleni futhi lokho iphupho lomqeqeshi,” esho eqhubeka. “Yonke into esibheke ukuyinqoba baphumile bakwenza lokho. Ebengekho ama-no-balls kwi-innings, ebemancane ama-wide, sicacisile futhi sizwa sengathi i-India sayifaka ngaphansi kwencindezi sonke isikhathi.”
“u-Phangi (Aaron Phangiso) uyabuya emuva kwekhefu elide, ebehlukile futhi ngicabanga ukuthi kuningi okuseza kuyena. Uveze ikhono lakhe futhi wasicikelela kahle isimo.”
Iqembu lasekhaya bekumele limise kahle ukushaya kwabo emuva kokuthi u-Jon-Jon Smuts ehanjiswe ukuyohlolwa ngesikhathi sekhefu emuva futhi kwagcina sekuthiwe ulimale isithupha. Ukhishiwe kwi-series futhi akekho ozongena esikhaleni sakhe.
u-Conrad usebenzise ithuba ukuthi akhuphule u-Dane Paterson kwinombolo yesithathu ukuze aqhube ukushaya ngolaka kweqembu. Lomdlali ophosayo ushaye u-four no-six njengoba ehlanganise u-11 emabholeni ayisikhombisa, ngaphambi kokuthi akhishwe u-Shardul Thakur.
“Bekumele sihlele kabusha, kodwa hlezi ngizwa sengathi kuzobangcono ukukora ngaphambili kunasekugcineni. I-wicket ibiyisicaba futhi ihamba kancane lokho kwenze kwabanzima ukukora. Ngiwathathe ngaphambili amathuba, ngafaka u-Dane Paterson phezulu ukuthi azame futhi athumele umyalezo kubadlali bethu ukuthi sisafuna ukudlala ikhilikithi yethu enolaka, ikakhulukazi ngaphambili.”
“Ukulahlekelwa u-Jon-Jon (Smuts) akwenzanga izinto zibe lula, kodwa angicabanganga ukuthi sizofika sishushuluza, bekuzohlezi kunzima. Njengomqeqeshi, ngiyajabula futhi ngiyathemba ukuthi bangaqhubeka kanjalo.”
Ukubheka phambili emdlalweni olandelayo bebhekene ne-Afghanistan ngeSonto (30 July), umqeqeshi ujabulile ukubona ukuthi iqembu lizohluza kanjani izinto elizifundile emdlalweni wokuqala futhi ukholwa ukuthi umphumela abanawo uzonika iqembu lakhe ukuzithemba ngosuku lomdlalo.
“Okokuqala, kuzomele sibenesiqiniseko sokuthi asibabukeli phansi,” esho eqhubeka u-Conrad. “Hayi ukuthi siqxile kwiqembu esizodlala nalo, okubalulekile izigaba kanye nobucwepheshe asizihlelele kona. Ngezinye izikhathi ukungazi ukuthi sibhekene nani yinto enhle ngoba kuyakukhulula futhi uphoqeleke ukudlala obhekene nakho.”
“Sizobheka ukuqhubeka nokwakha lokhu esifuna ukwenza kanye nekhilikithi esifuna ukuyidlala. Kunomsebenzi omningi osazokwenziwa futhi uma silandela imigomo ngakho ngiyathemba ukuthi kuzoletha ukunqoba okuningi. Sisabheka umdlalo omuhle futhi siyazi ukuthi sibhekene namaqembu adlala kahle, kodwa ngiyazi ukuthi ukuzithemba okulethwe ukunqoba kuzosiqhuba kulomqhudelwano.”